مشخصات فنی سامسونگ گلکسی A20 : یک گوشی ماندگار اقتصادی - مجله خبری ای بی سی مگ
Ny telefaona tetibola vaovao an’ny Samsung dia mendrika hividianana, ary ny Galaxy A20 dia iray amin’izy ireo. Ato amin’ity lahatsoratra ity mba hijery Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20 efa nandoa.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: Fampidirana
Ny finday mora vidy Samsung teo aloha dia naneho ilay fitenenana hoe “arakaraka ny mandoa vola no mihinana bebe kokoa”, fa ny vokatra vao haingana nataon’ny mpanamboatra toa ny Galaxy A20 sy Galaxy A50 dia tena lavitra an’io fitenenana io, ka ny sasany amin’ireo endri-javatra amin’ny telefaona More ireo mpanamboatra lafo vidy koa dia manome ny mpanamboatra azy.
Ny Galaxy A20 dia somary mandinika kely amin’ny lafiny fampisehoana, famolavolana ary fampisehoana kalitao, saingy manana fahaiza-manao sary tsara sy bateria matanjaka. Ato amin’ity lahatsoratra ity dia nandinika ny fepetra ara-teknika momba ny Samsung Galaxy A20 izahay. Maharaha vaovao.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: vidiny sy fepetra ara-teknika
Ny Galaxy A20 nodinihina ato amin’ity lahatsoratra ity dia mitentina $ 239. Ity vokatra ity dia mampiasa RAM 3 GB miaraka amin’ny fahatsiarovana anatiny 32 GB miaraka amin’ny fahafahana manohana karatra fitadidiana micro SD hatramin’ny 512 GB. Amin’ity fizarana ity dia hahita famaritana hafa momba ity vokatra ity ianao.
Famaritana ara-teknika Samsung Galaxy A20
miseho 6.4-inch AMOLED miaraka amin’ny famaha 1560 x 720 pixels
Fakan-tsary aoriana Dual misy sensor lehibe 13-megapixel miaraka amin’ny f / 1.9 aperture ary 5-megapixel wide-angle sensor miaraka amin’ny f / 2.2 aperture
fakan-tsary selfie 8 megapixel miaraka amin’ny aperture f / 2.0
fitadidiana anatiny 32 GB miaraka amin’ny fanohanana karatra fitadidiana micro SD hatramin’ny 512 GB
Fahafahana bateria 4000mAh
lafiny 158,5 x 74,7 x 7,62 mm
lanja 166g ny
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: Design
Raha ny momba ny andiany Galaxy A vaovao dia azo lazaina fa nanapa-kevitra ny Samsung ny hampiditra ny finday ara-toekarena miaraka amin’ny endriky ny telefaona sangany. Ny Galaxy A20, miaraka amin’ny fampisehoana 6.4-inch, bezels manify ary miendrika U, anisan’izany ny fakan-tsary selfie, dia tsy mahatonga olona hieritreritra fa mitazona telefaona mora ianao. Raha ny marina, ny toetra ara-toekarena amin’ity smartphone ity, toa ny Galaxy A50, dia lasa mazava rehefa mampiasa azy be dia be ianao.
Famerenana ny fepetra ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A50: Ny finday Samsung midadasika tsara indrindra
Ny fonon’ny lamosin’ny Galaxy A20 dia vita amin’ny plastika. Ity fonony ity dia tsy mampita ny fahatsapana ho mora amin’ny telefaona, fa manana olana manokana izy satria mora kikisana ary mitazona ny rantsan-tànanao eo aminy. Raha te hividy ity vokatra ity ianao, dia manoro hevitra anao izahay hividy saron-tava ho azy.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: fampisehoana
Ny Galaxy A20 dia mitovy habe amin’ny Galaxy A50. Ity finday ity dia manana efijery AMOLED 6,4 santimetatra miaraka amin’ny famaha 1560 x 720 piksel. Ny famahana an’ity tontonana ity dia tsy tsara toy ny famahana ny tontonana feno HD Plus, ary ny isan’ny piksela kely kokoa dia manondro mora foana ny kalitaony ratsy raha oharina amin’ny kalitaon’ny efijery Full HD Plus.
Ny hafatra an-tsoratra, ny kisary rindrankajy, ny sary, ny horonan-tsary, ary ny fiantraikan’ny animation aseho amin’ny efijerin’ny Galaxy A20 dia toa mikisaka kely, ary tsy mety amin’ny fandefasana sarimihetsika ny famaha ny efijery; Amin’ity fomba fijery ity, ny Moto G7 dia safidy tsara kokoa ho anao, satria na dia $ 299 aza ny vidiny, dia manolotra fampisehoana 2270 x 1080 piksel.
Na eo aza izany dia tsy maintsy ekena fa ny tontolon’ny Galaxy A20 dia manana famirapiratana tsara ary mahay mamokatra loko. Ity tontonana ity dia mandrakotra ny 100% amin’ny habaka loko sRGB ary afaka nahazo isa 0.35 tamin’ny fitsapana marina Delta-E natao ho an’ity famerenana ity. Mifandray amin’ity fitsapana ity dia tsy ratsy ny mahafantatra fa ny manakaiky ny isa azon’ny finday amin’ny 0 no marina kokoa.
Ny efijery napetraka amin’ny Galaxy A20 dia afaka manome hazavana 465 nits ihany koa. Ity sanda ity dia ambany noho ny salan’isa (488 nits), fa manome ny hazavana ilaina mba hijerena mora ny votoaty aseho amin’ny efijery amin’ny andro masoandro. Ny Galaxy A20 dia manana endri-javatra antsoina hoe Convenient dark mode mba hampihenana ny tsindry amin’ny mason’ny mpampiasa rehefa mijery ny efijery amin’ny toerana maizina.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: Camera
Samsung dia nametraka môdely roa misongadina misongadina misy sensor lehibe 13-megapixel misy aperture f / 1.9 ary sensor 5-megapixel midadasika miaraka amin’ny aperture f / 2.2 ao ambadiky ny Galaxy A20. Ny sensor 5-megapixel an’ny fakan-tsary dia mahita ny halalin’ny saha, mahatonga ny sary nalaina tamin’ny Galaxy A20 ho tsara kokoa noho ny sary nalaina tamin’ny fakan-tsary Moto G7 Power tokana.
Ny fakantsary lehibe Galaxy A20 dia mampifandanja ho azy ny hazavana voajanahary mba haka sary tsara kokoa. Raha zoom in amin’ny sary nalaina miaraka amin’ireo fanovana ireo ianao dia ho hitanao fa somary manjavozavo ny antsipirihan’ny sary, na izany aza, azo lazaina fa miasa tsara ny fakantsary amin’ny toe-javatra toy izany. Ny fakantsary lehibe an’ny Galaxy A20 dia maka sary tsara kokoa any ivelany. Ny sary alainao amin’ity fakantsary ity amin’ny andro masoandro dia manana antsipiriany sy loko tena tsara, ary tsy toy ny sary nalaina tamin’ny fakantsary Moto G7 Power, tsy manana alokaloka manga izy ireo.
Raha liana amin’ny fomba sarin’ny telefaona sangany ianao, ny Galaxy A20 dia telefaona tsara ho anao satria manome anao ity endri-javatra antsoina hoe Live Focus ity. Ny fakantsary aoriana Galaxy A20 dia mifantoka ho azy amin’ny tanjona ihany koa, ahafahanao mifehy ny habetsaky ny blur.
Ny fakan-tsary selfie 8-megapixel Galaxy A20 dia miasa tsara ihany koa. Ity fakantsary ity dia maneho tsara ny loko amin’ny sary, tsy mahavoky azy ireo toy ny fakantsary hafa manana vidiny mitovy. Azo lazaina fa ny fakan-tsary selfie Galaxy A20 dia manana fampisehoana tsara kokoa amin’ny sary noho ny fakantsary selfie Moto G7 Power.
Ny processeur Exynos 7904 ampiasaina amin’ny Galaxy A20 dia chip midadasika. Ny fampiasana ity puce amin’ity finday ara-toekarena ity dia nahatonga ny vidin’ity vokatra ity ho mora kokoa noho ny vidin’ny Galaxy A50 miaraka amin’ny Exynos 9610, na dia kely noho ny herin’ny Exynos 9610 aza ny herin’ity puce ity.
Ny Galaxy A20 dia nahazo isa 4,174 tamin’ny fitsapana Geek Bench 4 (fitsapana fampisehoana ankapobeny), raha nahazo isa 5,200 kosa ny Galaxy A50 tamin’ny fitsapana. Ny naotin’ity smartphone ity tamin’ity fitsapana ity dia ambany noho ny naotin’ny Moto G7 Power. Ny Moto G7 Power dia nahazo isa 4,814 tamin’ity fitsapana ity noho ny processeur Qualcomm Snapdragon 630.
Amin’ny ankapobeny, raha tianao ny Galaxy A20 hanome anao fampisehoana tsara dia tsy maintsy mampiasa fampiharana iray ihany ianao miaraka aminy, satria ny fampandehanana fampiharana maromaro miaraka dia mampiadana an’ity smartphone ity. Ny Galaxy A20 dia tsy natao hitantana lalao toy ny finday tetibola hafa. Ohatra, raha mihazakazaka Asphalt 9: Legends miaraka amin’ity smartphone ity ianao, dia ho hitanao ny fahatarana lava amin’ny fampandehanana ny lalao sy ny fihenan’ny frame, ary ny lamosin’ny telefaona dia ho mafana.
Ny Galaxy A20 dia tsy mitaredretra fotsiny amin’ny fampandehanana rindrambaiko mavesatra, fa manana sensor fanondro miadana ihany koa. Mitaky segondra vitsy ity sensor ity mba handraketana ny mombamomba ny fanondronao, ka raha tokony hampiasa an’io endri-javatra io ianao, dia mety hitodika amin’ny famantarana na endrika.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: Fahombiazan’ny bateria
Ny Galaxy A20 dia manaporofo ny tenany aminao miaraka amin’ny bateria 4000 mAh. Ny bateria ampiasaina amin’ity smartphone ity dia afaka manao ny baiko fitetezana tranonkala mandritra ny 13 ora sy 46 minitra amin’ny fiampangana tokana, raha toa ka adiny 10 izany ho an’ny finday mahazatra. Raha ampitahaina, ny Nokia 7.1, izay $ 100 lafo kokoa noho ny Galaxy A20, dia maharitra 7 ora sy 42 minitra, ary ny Moto G7 Power miaraka amin’ny bateria 5000 mAh mandritra ny 15 ora sy 35 minitra.
Samsung dia nampiditra ny Galaxy A20 miaraka amin’ny charger 15-watt, ka tsy mila miandry ela ianao vao ho feno ny bateria foana an’ity smartphone ity. Ity charger ity dia mameno 30% ny bateria Galaxy A20 ao anatin’ny 30 minitra ary maharitra adiny 2 latsaka vao mameno ny bateria feno.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: Fifandraisan’ny mpampiasa
Ny Galaxy A20, toy ny ankamaroan’ny telefaona Samsung 2019, dia niditra an-tsena niaraka tamin’ny rafitra fiasa Android 9. Ny rafitra fandidiana dia manana ny interface Samsung One UI eo aminy, izany no mahatonga ny kisary rindrambaiko sy lahatsoratra eo amin’ny farany ambany amin’ny efijery amin’ny Galaxy A20 dia lehibe kokoa noho ny telefaona misy rafitra fiasa Android manta.
Ny interface One UI dia miasa tsara amin’ny efijery lehibe an’ny Galaxy A20, ary tena mora ny miasa miaraka amin’ny baiko mihetsika. Ny fiasa fanaraha-maso ny hetsika Galaxy A20 dia manafoana ny filana fanalahidy virtoaly fanampiny. Manantena izahay fa ny Galaxy A20 dia hahazo ny fanavaozana rindrambaiko Android Q amin’ny taona 2020 ihany koa. Samsung dia mbola tsy maika namoaka fanavaozana toy izany, ka azo inoana fa ny Galaxy A20 dia hahazo ity fanavaozana ity aorian’ny telefaona sy mpanamboatra andiany S.
Araka ny voalaza, ny Galaxy A20 dia manana fitahirizana anatiny 32GB, saingy tsy azonao ampiasaina afa-tsy 15 ka hatramin’ny 20GB amin’ity fahatsiarovana ity satria ny ambiny amin’ny habe dia fehezin’ny rafitra fiasan’ny telefaona sy rindrambaiko. Azonao atao ny mamafa ny sasany amin’ireo lozisialy ireo, fa raha te hanafaka toerana bebe kokoa ianao dia tsy maintsy manaisotra lozisialy hafa amin’ny firafitry ny telefaona.
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A30; Famerenana feno momba ny Samsung Galaxy A30
Famaritana ara-teknika an’ny Samsung Galaxy A20: Fehiny
Ny telefaona mora vidy rehetra dia manana ny tsy fahampiana, ary ny tsy fahampian’ny Galaxy A20 dia ny famahana ny efijery ambany sy ny fampandehanana miadana, na dia manamaivana ny tsy fahampiana aza ny fakantsary matanjaka sy ny bateria mahomby. Ny fanoherana avo lenta amin’ny fonon’ny Galaxy A20 dia fahalemena iray hafa amin’ity finday ity, na dia azonao atao aza ny manamboatra izany fahalemena izany amin’ny fividianana sarony fiarovana.
Ny Galaxy A20 amin’ny ankapobeny dia tsy tsara kokoa noho ny Moto G7 Power, fa mpifaninana tsara amin’ity finday ity. Raha tsy te handany vola be amin’ny finday ianao ary tsy miraharaha ny fahamaizan’ny telefaona, ny Galaxy A20 dia safidy tsara noho ny bateria sy ny fakantsary matanjaka.
Fahombiazan’ny bateria tsara
Fakan-tsary Live Focus tsara fampisehoana
Famahana efijery ambany
Android Samsung Telefaonina midadasika